Umqondo Wakho Ungowethu | Martech Zone
ISonto, Ephreli 20, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule bengilokhu ngiqoqa futhi ngibeka phansi izincwadi - enye yazo bekuyi-The Big switch, ngo UNicholas Carr. Namuhla, ngiqedile ukufunda le ncwadi.
UNicholas Carr wenze umsebenzi omuhle ekwakheni ukufana phakathi kokuvela kwegridi yamandla kagesi kuleli kanye nokuzalwa kwe-computing yamafu. Encwadini efanayo, i-Wired ine-athikili enhle, ebizwa ngePlanet Amazon, kushicilelo lwayo lwangoMeyi 2008 olukhuluma ngendaba yefu lase-Amazon. Qiniseka ukuthi uyayihlola. Izintambo zibhekise ekunikezelweni kwe-Amazon njenge-Hardware njengesevisi (HaaS). Yaziwa nangokuthi Ingqalasizinda njengesevisi (IaaS).
Ngenkathi ngishayela ihlombe ukuqonda kukaNicholas mayelana ne-computing yamafu nekusasa lokuthi 'sizokuthuthuka' kanjani kungekudala, ngamangala lapho eqala ukuxoxa ngokungenakugwemeka isilawuli amakhompyutha abengaba phezu kwethu njengoba siqhubeka nokuwahlanganisa - ngisho nangokwezinto eziphilayo. Incwadi ithatha umehluko emsebenzini abathengisi abawufezayo njengamanje ekufakeni idatha - futhi icishe ibheke ngokwesabisayo ukuthi lokhu kungaba kuphi ngokuzayo.
Njalo lapho sifunda ikhasi lombhalo noma sichofoza isixhumanisi noma sibuka ividiyo, njalo lapho sifaka okuthile enqoleni yokuthenga noma senza usesho, ngaso sonke isikhathi lapho sithumela i-imeyili noma sixoxa efasiteleni lokuthumela imiyalezo ngokushesha, siyagcwalisa ngendlela “yerekhodi.” … Sivame ukungazi ngemicu esiyiphothayo nokuthi isetshenziswa ngobani futhi. Futhi noma ngabe besazi ukuthi sizogadwa noma silawulwa, kungenzeka singenandaba. Kakade, siyazuza nasekwenzeni samuntu i-Intanethi eyenza kube nokwenzeka — kusenza abathengi nabasebenzi abaphelele ngokwengeziwe. Samukela ukulawula okukhulu ngokubuyisela okulula. Ubulembu besicabucabu benziwa ukukalwa, futhi asijabuli ngaphakathi.
zokukhwabanisa futhi isilawuli angamazwi aqinile kakhulu engingavumelani nawo. Uma ngikwazi ukusebenzisa idatha yamakhasimende ukuzama ukubikezela ukuthi bangahle bafune ini, angibalawuli noma ngibaphathe ngokuthenga. Esikhundleni salokho, ngenzela ukuhlinzeka ngemininingwane, ngizama nje ukubanikeza lokho okungenzeka ukuthi bakufuna. Lokho kusebenza kahle kubo bonke abathintekayo.
Ukulawula kuzokhombisa ukuthi isikhombimsebenzisi ngandlela thile siyinqobile inkululeko yami yokuzikhethela, okuyisitatimende esingenangqondo. Sonke singamaZombi angenangqondo akwi-Intanethi angenawo amandla okuzivikela esikhangisweni sombhalo esibekwe kahle? Ngempela? Kungakho izikhangiso ezihamba phambili zisathola kuphela amanani wedigri eyodwa yokuchofoza.
Ngokuqondene nekusasa lokuhlanganiswa komuntu nokuhlanganiswa kwemishini, nginethemba elikhulu ngalawo mathuba. Cabanga ukukwazi ukufinyelela enjini yokusesha ngaphandle kwesidingo sekhibhodi ne-inthanethi. Abantu abanesifo sikashukela bazokwazi ukuqapha amazinga kashukela egazini BABE futhi babone ukudla okungcono kakhulu abangakudla ukuhlinzeka ngokudla. Ekudleni? Mhlawumbe ungabheka okudla nsuku zonke kwekhalori noma ubale amaphuzu oMqaphi Wesisindo njengoba udla.
Iqiniso ukuthi sinokulawula okuncane kakhulu phezu kwethu, ungalokothi ukhathazeke ngakho AI. Sinezwe elinamantongomane ezempilo alamba imizimba yawo, asebenzise amantongomane aguga amalunga awo, imilutha enamanga, akhohlise futhi ebe ukuze alungiswe… njll. Siyimishini engaphelele ngokwethu, ehlala izama ukwenza ngcono kepha ivame ukusilela.
Amandla wokweqa usebenzisa ikhibhodi nokuqapha bese 'ungena' ku-Intanethi akuyona into ecasulayo kimi nhlobo. Ngiyakwazi ukukuqonda lokho isilawuli igama elisetshenziswa ngokukhululeka futhi, kubantu, alisoze laba ngokoqobo. Asikaze sikwazi ukuzilawula - futhi imishini eyenziwe ngabantu ayisoze yakwazi ukunqoba umshini ophelele uNkulunkulu awuhlanganisile.
IBig switch ifundwe kahle futhi ngingakhuthaza noma ngubani ukuthi ayithathe. Ngicabanga ukuthi imibuzo eyiphakamisayo ekuhlakanipheni okufakelwayo kwesikhathi esizayo mihle, kepha uNicholas uthatha umbono othusayo ngaleli thuba kunombono onethemba lokuthi izokwenzani ngokusebenzisana kwabantu, ukukhiqiza kanye nekhwalithi yempilo.
Tags: ikhalendaphikisana nemibonoukudalwa kokuqukethweukuphathwa kwemicimbiipulatifomu yomcimbiikhalenda le-googleiCalipirate bay
Ngo-Apr 20, i-2008 ku-8: i-59 PM
Nami ngiyahamba ngifunda incwadi kaNick .. kuze kube manje bekufundwa kahle kakhulu - ngethemba ukuthi kuzohlala kunjalo
Ngo-Apr 20, i-2008 ku-9: i-17 PM
UNicholas ubonakala eyisisebenzi esikhohlakele emhlabeni wezobuchwepheshe, kepha ngiyakujabulela impela ukufunda ibhulogi yakhe futhi ngiyithandile le ncwadi. Muva nje, ngikhangwe kakhulu ezincwadini zomlando kunezinye - futhi uNicholas unikeze ukuqonda okukhulu ngokuvela kokukhiqizwa kwamandla kanye nokufana nekhompyutha.
Leyo bekuyingxenye engiyithanda kakhulu yencwadi futhi ngicabanga ukuthi ukufana kwakhe bekuqonde ngqo. Kodwa-ke, lapho edlula lokho, izinto zaba zimbi kancane. Hhayi ukuthi imininingwane kwakungeyona into okufanele sizikhathaze ngayo - ukuthi nje ngicabanga ukuthi iyishaye indiva amathuba amangalisayo.
Kujabulele ukuyifunda - angikwazi ukulinda ukubona ukuthatha kwakho nayo!
Ngo-Apr 21, i-2008 ku-8: 04 AM
Siyabonga ngokuqondisisa. Ngiyavuma ukuthi amaqhinga okusabisa angathengisa izincwadi
kubafundi be-novice, kepha iqiniso ukuthi amakhompyutha ahlome nge-
idatha..ayenzi futhi ngeke "ilawule umhlaba" .. CrAzy !!!
Qhubeka nomsebenzi omuhle!
Ukumaketha iminyaka futhi ungesabi i-PC yami!